Nepali Rajneeti | काठमाडौंमै घट्यो यस्तो अनौठो घट्ना, प्रहरी नै पुगेर लियो नियन्त्रणमा !
काठमाडौंमै घट्यो यस्तो अनौठो घट्ना, प्रहरी नै पुगेर लियो नियन्त्रणमा !
भाद्र ३०, २०७८ बुधबार ८९ पटक हेरिएको
पे’ट दु’ख्ने समस्या भएकी महिलामाथि बो ‘क्सी आ’रो’पमा काठमाडौंमै कु’ट’पि’ट भएको छ ।
घट्नामा सं’लग्न धामीसहित ४ जनालाई प क्राउ गरिएको काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुका प्रमुख अशोक सिंहले बताए ।
यस घटनाको आरोपमा लुभू बस्ने श्रीमान, ४० वर्षीय सानो बुवा दिपेन तामाङ भन्ने दिपेन्द्रकुमार थिङ, मामा दशनारायण महर्जन र ३३ वर्षीय साथी जनार्दन पाण्डे पक्राउ परेका छन्।
बो’क्सी ला’गेको भनी यस्तो गरेको जा हेरी महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा परेपछि प्रहरीले श्रीमानसहित चार जनालाई भदौ २२ गते पक्राउ गरेको हो। सिंहका अनुसार घ टना १८ र १९ गते स्वयम्भूमा भएको थियो।
‘स्वयम्भूको ठूलो भर्‍याङमा ९ दिनअघि भएको घट नाबारे जा’हेरी परेपछि प क्राउ गरिएको हो,’ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सिंहले भने, ‘यस्तो आ’रोप’सम्बन्धी क’सू’रमा ७ दिन म्याद थप गरेर अनु सन्धान भइरहेको छ ।’
श्रीमतीलाई पेटमा सम स्या आएपछि श्रीमानले उपचार गराउँछु भन्दै दिपेन तामाङलाई देखाउन लगेका थिए। तामाङले ती महिलालाई हेरेपछि बो’क्सी लागेको छ भन्दै यो ह’र्कत गर्न लगाएको प्रहरीले जनाएको छ।
साथै उनीहरू चारै जनाको मिलेमतोमा महिलालाई रातभर कु’ट’पि’ट गर्नुका साथै शौचालयबाट फोहर समेत ल्या’एर ‘खु’वा’एको पी’डि’त महिलाले जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छन्। ताजा खबरबाट साभार गरियको ।